Stratigraphy: kedu ihe ọ bụ, gịnị bụ ebumnuche ya na gịnị bụ ụkpụrụ ya | Network Meteorology
Kedu ihe bụ stratigraphy
Geology bụ sayensị gbara ọkpụrụkpụ nke n’aka nke ya nwere ngalaba pere mpe nke na-amụ omimi nke akụkụ abiotic nke ụwa anyị. Otu n'ime alaka geology bu stratigraphy. Ọ bụ sayensị nke na-amụ nkọwa, nkọwa, njirimara na usoro kwụ ọtọ yana kwụ ọtọ. O bu ngalaba sayensi nyere anyi aka imata ihe omuma banyere oge gara aga nke uwa anyi.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara ihe stratigraphy bụ, uru ọ bara na ebumnuche ọ na-amụ.
1 Kedu ihe bụ stratigraphy
2 Ebumnuche nke stratigraphy
3 Kpụrụ bụ isi nke stratigraphy
Ọ bụ ngalaba nke mmụta ala nke na-atụgharị ma na-akọwa otu esi etinye ugwu ahụ kemgbe ọtụtụ puku afọ. Iji nwee ike ịkọwa ihe ndị a niile, anyị ga-eburu n'uche na anyị na-ekwu maka otu ọkwa geological oge. A na-ekpuchi nkume ndị ahụ na strata na stratum ọ bụla na-anọgide n'oge ahụ mgbe edebere ya. Ya mere, ọ na-enye anyị ozi gbasara oge a anyị hụrụ onwe anyị. Dịka ọmụmaatụ, okwute sedimenti nke na-akpụ ugbu a na - agbanwe agbanwe kemgbe ọtụtụ puku afọ ọ were were guzobe ha. Nke a bụ ihe ga-enye ozi gbasara oge etinyere ya.
Ihe stratigraphy na-agba mbọ bu imata ma mụọ ihe ọmụma nkume ndị a kpụrụ akpụ nyere anyị. Ọ bụkwa ngalaba nke geology nke na-ahụ maka nkewa na njikọta nkume ndị a. Nke a bụ otu ha si ekpebi usoro na oge nke ihe ndị mere na oge ọmụmụ nke ekpebiri n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị.
Ebe ọ bụ na e nwere ihe ndị nwere otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ na-eme ka nkume ghọọ sedimentary, ha bụ ihe ndị bụ isi nke stratigraphy na-amụ. Usoro ndị malitere nguzo nke sedimentary nkume bụ mpaghara mbụ nke stratigraphy ga-arụ ọrụ. Ọ na - enyere ngalaba sayensị aka dịka paleontology iji kpughee ụdị ihe ndị dị ndụ biri n’ime mgbe ha mebere nkume ndị a.
Mgbe edere stratigraphic nke ebe, ọ bụrụ na ọ nweta nsonaazụ nke ịga n'ihu usoro ndị a na-eme nkume sedimentary site na oge ala. Ọ dị ka a ga - asị na ọ bụ ntọala nke data niile dị mkpa iji ghọta mgbanwe ndụ na mbara ụwa. N'ihi stratigraphy Enweela ike ịmata nnukwu ozi dịka nhazi nke efere tectonic site na oge na akụkụ nke mgbanwe ihu igwe na ọkwa ụwa.
Ebumnuche nke stratigraphy
Alaka ụlọ ala a nwere ọtụtụ ebumnuche bụ isi. Ka anyị nyochaa nke ọ bụla n'ime ha:
Chọpụta ihe. Iji mara usoro usoro usoro nke ịkpụzi nkume sedimentary, ọ dị mkpa ịchọpụta ihe akụrụngwa ndị a.
Nchịkọta nke nkeji stratigraphic. Nchịkọta stratigraphic bụ nke nwere otu akụrụngwa na stratum ahụ. Nke ahụ bụ, anyị ahụghị ụdị nkume sedimentary nke emere n'oge oge a kapịrị ọnụ.
Nhazi nke stratigraphic nkeji. Ozugbo achọpụtara ihe na stratigraphic nkeji, a na-anwa ịtụ ha n'oge. Nke ahụ bụ, nke stratigraphic nkeji guzobere tupu na nke kpụrụ mgbe. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume inweta nnukwu ozi gbasara geology nke mbara ala.
Nyocha nke ngalaba stratigraphic. Ọ bụghị naanị na stratigraphy nke mbara ala a maara dị ka ọrụ dị elu. I nwekwara ike ikwu atụmatụ na afọ nke ụfọdụ nkume.
Mkpụrụ ndụ ihe nketa nkọwa nke nkeji. Mgbe inyocha otu stratigraphic unit, inwere ike inyocha ihe niile mejupụtara ya na ihe kpatara eji kpụọ ha.
Nkọwa na okewa oge. Ọ bụ maka atụmatụ nke afọ nke nkume na ihe ọmụma nke ma ndị dị ndụ na ihu igwe ụwa nke dị n'oge ahụ.
Nyocha mmiri. Stratigraphy bụ ngalaba dị mkpa na sayensị mgbe a bịara n'ịmụ banyere ntọala osimiri n'akụkụ ụwa niile.
Ma ọ bụ sayensị nwere ike ịdebanye aha, mpempe akwụkwọ lithological, anụ ahụ na kemịkalụ, mmekọrịta mmekọrịta afọ, nnabata mbụ, nkesa na ọdịnaya nke okike nke nkume sedimentary. Site na ozi a niile ị nwere ike ịmụtakwu banyere geology nke teren na oge etinyere ya. Njirimara ndị a niile na-amata ma wughachi usoro ihe ọmụmụ ụwa nke mere n'oge ụwa niile.
Kpụrụ bụ isi nke stratigraphy
E guzobere sayensị a n'ụkpụrụ ụfọdụ elementrị nke sitere na ya wee mepụta ihe ọmụma ndị ọzọ enwetara:
Cikpụrụ nke horizontality mbụ ma ọ bụ akwa mkpuchi. Ọ bụ ụkpụrụ nke na-egosi na a na-edebe eriri ahụ na ntanetị, nke tọchara onye nọ n'okpuru na nke ọdụdụ dị n'elu. Ọ bụrụ n’ịga n’ihu na-enyocha mpụta, ị ga - ahụ na mbuze anaghị egbochi ha.
Ibelata ma tinye mmekọrịta. Ọ bụrụ na anyị ahụ ịkpụ na stratum, anyị ga-amarịrị ihe mere okenye atụmatụ ahụ bụ usoro egbutu ya karịa nke egbutu. Nkume dị obere karịa iberibe nkume ndị dị na ya.
Omume. Ọ bụ banyere ụkpụrụ ahụ nke na-anọchite anya na "ugbu a bụ isi ihe dị n'oge gara aga." Site na nke a anyị na-ekwu na osimiri, nkume, oké osimiri na kọntinent agbanweela n'akụkụ ha niile. Agbanyeghị, iwu ndị na-akọwa mgbanwe na iwu nke mgbanwe nke ihe ndị a ga-agbanwe agbanwe oge.
Ọganihu n’usoro. Dị nnọọ ka strata si nwee usoro oge, usoro okike ndị a chọtara na strata nwekwara usoro eji amata ha.
Mbufe nke facies. Isi okwu bụ na kehochi uzo nke facies bụ otu ihe dị ka nke vetikal.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ dị mkpa ịmata strata ịmatakwu banyere geology nke ụwa anyị. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere stratigraphy.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kedu ihe bụ stratigraphy